HOLAFI-PARITRY NY DOKOTERA: Nanamafy ny fiarovana ny asan’ny dokotera ny teto Analamanga. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE HOLAFI-PARITRY NY DOKOTERA: Nanamafy ny fiarovana ny asan’ny dokotera ny teto Analamanga.
HOLAFI-PARITRY NY DOKOTERA: Nanamafy ny fiarovana ny asan’ny dokotera ny teto Analamanga.
By Nirinajuil 25, 2017, 06:43 0
Anisany mahatonga ny fisolokiana ho dokotera ny firoboroboan’ny teknolojia. Betsaka ireo fitaovana azo itsaboana mivoaka etsy sy eroa izay tsy mila dokotera nandalo fianarana momba ny asa maha mpitsabo. Manoloana izany, manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana ireo dokotera mikambana ao amin’ny holafi-paritry ny dokotera miasa eto Analamanga mba hijery akaiky izany satria sarobidy sy saro-pady ny fahasalamana.
Izany indrindra no anton’ny lohahevitry ny fihaonam-ben’ny dokotera eto Analamanga hoe: “ny hajan’ny asan’ny dokotera”. Ankoatra fifampizarana traikefa amin’ny samy mpitsabo, ventin-kevitra noresahana nandritra ny fivoriana, izay notontosaina ny 21 jolay 2017 ny fampahafantarana ny zava-baovao manodidina ny fitsaboana toy ny fanafody, ny fitaovana ho enti-mitsabo…
Noho ny fivoaran’ny teknolojia, tsy lojika intsony izany tsy mety miteraka izany ho an’ny “Centre de Fertilité de Madagascar” na (CEFERMAD). Nambaran’ ny dokotera lehiben’ity ivon-toeram-pitsaboana manampy ny vehivavy hitoe-jaza, RAKOTOBE Andriamaro fa azo atao tsara ny miteraka na dia manana olana aza.
Nanamafy ny Filohan’ny Holafitry dokotera Analamanga, Dr Lalaina RAKOTONIAINA fa hanamafisana ny firaisan-kinan’ireo dokotera ihany koa ity fivoriam-be ity.
Previous PostMADAGASCAR FASHION WEEK : Manandratra ireo mpamorona lamaody. Next PostVOVONANA MAMPIRAY: Hiteraka korontana ny fifidianana amin’ny 2018 raha…